Iindaba-ze-NDAA zoom zoom block block
Iimodyuli ze-Camera ze-IP zoom
Iimodyuli ze-4K zoom
Iimodyuli ze-4MP zoom
Iimodyuli ze-2MP zoom
Iimodyuli zeKhamera eziDijithali
Iimodyuli zeKhamera yeDronone
Iimodyuli ezimbini zeSensor
Iimodyuli zeKhamera eshushu
Iimodyuli zeHurmal ezimbini
Iimodyuli ze-Thermal ezili-1280
Iimodyuli ze-Thermal ezingama-640
Iimodyuli zeHrmal ezingama-384
Iikhamera zeDrone Gimbal
Iimpawu ze-EO / ze-IR
I-4K Zoom Gimbals
Iinkqubo zokubeka indawo kwi-Bi-Spectrum
Iikhamera ze-Dome PTZ
Iikhamera zebhlokhi ye-NDAA ehambelanayo
Jonga iSheen inokubonelela ngokuhambelana ne-NDAA zoom block zoom.
Jonga i-Sheen Mstar zoom block camera zi-100% ze-NDAA ziyahambelana.
Ukuba uvile malunga noluhlu olumnyama lwase-USA lweemveliso ezinje ngeHikvision, Dahua kunye neHuawei, ke mhlawumbi ucinga ukuba ujonge ukusondeza ikhamera engasebenzisi iseti yeHuawei Hisilicon. Jonga iSheen inokuhlangabezana neemfuno zakho.
Yintoni ukuthotyelwa kwe-NDAA?
Ugunyaziso lukaJohn S. McCain lwezoKhuselo kuZwelonke (NDAA) ngumthetho wobumbano waseMelika ochaza uhlahlo-lwabiwo mali, inkcitho kunye nemigaqo-nkqubo yeSebe lezoKhuselo lase-US. Kunyaka-mali ka-2019, i-NDAA Icandelo lama-889, lithintela urhulumente wase-US ekuthengeni ividiyo kunye nezixhobo zonxibelelwano kwiinkampani ezithile zase-China kunye neenkxaso-mali zabo.
Zilumkele ii-OEMs okanye izixhobo ezinelebheli
Ngenxa yokuba uninzi lweekhamera kunye nezinye izixhobo zokugada zibhalwe ngasese (i-OEM) kunokuba nzima ukuxelela ukuba isixhobo esithile sivaliwe, ngokusekwe kwigama lophawu.
Abavelisi ababini abakhulu abakuluhlu oluvaliweyo yiHikvision kunye neDahua. Nangona kunjalo, nganye ithengisa kwii-OEMs ezininzi, ezibhala iimveliso ngegama lazo.
Ukuba ufuna i-NDAA izixhobo zokukhusela ezihambelanayo, kunokufuna uphando oluthe kratya kwaye kubandakanya ukubuza malunga nezinto ezivaliweyo ngokunjalo. Umzekelo, iHuawei ngumenzi wezinto ezikuluhlu olwalelweyo kwaye banikezela ngeeseti zeetship kubavelisi beekhamera ezininzi.
Jonga i-Sheen ehambelana neekhamera, musa ukusebenzisa naliphi na icandelo labaxhasi. Nxibelelana sales@viewsheen.com ngeenkcukacha.
Ixesha leposi: Dec-22-2020
© Copyright - 2016-2021: Onke amalungelo agciniwe.